Rake Bar မျက်နှာပြင် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ Rake Bar မျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်, CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည် Rake Bar မျက်နှာပြင်သင်ပြဿနာများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်များနိမ့်ကျအရည်အသွေးကစိတ်ပျက်နေကြသည် .If ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်စွာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရုတ်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့။
ပုံစံ - CS
ရှေ့ rake အမှိုက် Remover
Front rake Trash Remover ကို pump station သို့မဟုတ်ရေသန့်စင်စနစ်၏ဝင်ပေါက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်.ဒါဟာအောက်ခံ၏ရေးစပ်သည်,တိကျတဲ့ထယ်ပုံ tines,ထွန်ခြစ်,ဓာတ်လှေကားကွင်းဆက်နှင့်မော်တာလျှော့ယူနစ်စသည်တို့.ကွဲပြားခြားနားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းအရကွဲပြားခြားနားသောအကွာအဝေးသို့စုဝေးသည်.
ထွန်ခြစ်၏ပစ္စည်းသည်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ABS ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးရေတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးသက်တမ်းတိုးစေနိုင်သည်။.
အပြင်,ကျနော်တို့ client ကိုအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ပြုလိမ့်မည်’တောင်းဆိုချက်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/rake-bar-screen.html
အကောင်းဆုံး Rake Bar မျက်နှာပြင် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Rake Bar မျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan